အဓိကဖြစ်ရပ်သည်ဆေးစွဲခြင်းသိပ္ပံနှင့်ကုသမှုနယ်ပယ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အမေရိကန်၏စွဲလမ်းမှုဆေးပညာ (ASAM) မှအမေရိကန်၏ထိပ်တန်းစွဲပညာရှင်များသည်သူတို့၏ကျယ်ပြန့်သောစွဲလမ်းမှုအဓိပ္ပာယ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အသစ်နှင့်ဆက်နွယ်သောအဖြေများသည် www.yourbrainonporn.com တွင်ဖော်ပြထားသောအဓိကအချက်များကိုပဲ့တင်ထပ်ထားသည်။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်အနေနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကဲ့သို့အဓိကကျသောအချက်များကဲ့သို့ပင် ဦး နှောက်ကိုထိခိုက်သည် ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်လက်တွေ့ကျသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုများသည်“ စစ်မှန်သောစွဲလမ်းမှု” များဟုတ်မဟုတ်ဟူသောငြင်းခုံမှုကိုအဆုံးသတ်စေသည်။
ဤ ဆောင်းပါး အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုအပေါ် ASAM ၏ကောက်နုတ်ချက်ကိုကောက်နုတ်ချက်။
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရအရက်သေစာ၊ ဘိန်းဖြူနှင့်လိင်အပေါ်စွဲလမ်းမှုအားလုံးသည်အခြေခံအားဖြင့်အတူတူဖြစ်သည်ကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ကနေဒါဆေးစွဲမှုဆေးပညာအသင်းဥက္ကpresident္ဌနှင့်အဓိပ္ပာယ်အသစ်ကိုဖော်ထုတ်သော ASAM ကော်မတီ၏ဥက္က,္ဌ Dr. Raju Haleja က“ ဆေးစွဲမှုကိုရောဂါတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ ရောဂါများ။ စွဲလမ်းသည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်။ သင့် ဦး နှောက်ကိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာအရေးမကြီးဘူး။ လမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်သင်ဟာစွဲလမ်းမှုအားလုံးကိုအားနည်းသွားလိမ့်မယ်။ ” [ASAM] သည်အရက်သေစာသို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူသို့မဟုတ်ကြည်လင်သောမက်ကိုစွဲစွဲလမ်းမှုအရလိင်၊ လောင်းကစား၊ အစားအစာစွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောရောဂါလက္ခဏာများကိုဆေးစစ်ခြင်းက၎င်း၏သိမ်မွေ့သော်လည်းတူညီသောကျယ်ပြန့်စွာရောက်ရှိနေသောအခိုင်အမာပြောဆိုမှုများထက် ပို၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာများဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဤအပိုင်းကိုသုံး ASAM စာရွက်စာတမ်းများပါရှိသည် (ASAM က်ဘ်ဆိုက်မှ link ကို),
အမေရိကန်ဆေးစွဲလမ်းမှုဆေးစွဲ - အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက် - ရှည်လျားသောဘာသာပြန်ကျမ်း
ပြောင်းလဲမှု၏အကြောင်းပြချက်အပေါ်အလွန်ကောင်းမွန်သောဆောင်းပါး (“ Fix”) - အမေရိက၏ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူများ (ASAM) သည်စွဲလမ်းမှုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အသစ်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်သည်
အဆိုပါသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်အပိုဒ်: စွဲလမ်းနေတဲ့ ဦး နှောက်ရောဂါမဟုတ်ဘဲမကောင်းတဲ့အပြုအမူ - ASAM
အောက်ပါ porn စွဲဖို့အဓိက-related အချက်များငါ၏အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပါသည်:
စွဲလမ်းကဓာတုပစ္စည်းသို့မဟုတ်အပြုအမူတွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိတဦးတည်း "ရောဂါ" ဖြစ်ပါတယ်။
sensitive ကပြောင်းလဲ prefrontal circuitry, ပြောင်းလဲစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်နှင့် desensitization: အလားအလာစွဲလမ်းအပြုအမူတွေနှင့်တ္ထုများတူညီအာရုံကြော circuitry အတွက်တူညီတဲ့အခြေခံကျကျအပြောင်းအလဲများကိုလည်းသွေးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
အထက်ပါ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကို“ ဆိုးရွားသည့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကြားမှဆက်လက်သုံးစွဲခြင်း” ကဖော်ပြသည်။ စွဲလမ်းရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများသည်အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ဘဲရောဂါဗေဒ၏ပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုဖြစ်သည်။
မကြာခဏညစ်ညမ်းစွဲအပါအဝင်အမူအကျင့်စွဲလမ်း၏တည်ရှိမှုကိုငြင်းဆိုရန်အသုံးပြုခဲ့သည့်ဂုဏ်ထူး, ဟောင်း "မလှူ vs. စွဲ" Eradicates ။
စွဲလမ်းမှုသည်အဓိကရောဂါဖြစ်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်စိတ်ရောဂါသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများကဲ့သို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြcausedနာများကြောင့်မဟုတ်ဘဲစွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများသည်စိတ်ဖိစီးမှုကိုသက်သာစေရန်“ မိမိကိုယ်ကိုဆေးကုသခြင်း” ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းလူအများလက်ခံသောအယူအဆကိုငြိမ်သက်စေသည်။ စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏။
အသစ် ASAM ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲဖော်ပြထားခြင်း, သို့မဟုတ် (ကအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖျောပွထားတဲ့) လိင်စွဲလမ်းကနေခွဲခြားမထားဘူး။ သိသာထင်ရှားတဲ့မူဝါဒကြေညာချက်အရာအားလုံးကိုဖြေရှင်းမနိုင်ပေမယ့်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစွဲလိင်စွဲလမ်းမထက်ဝေးကျယ်ပြန့်အဖွဲ့ကိုသာသက်ရောက်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပဲ။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း, junk အစားအသောက်လိုပဲသဘာဝဆုလာဘ်တစ်ခု supernormal ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းလိင်, အစဉ်အမြဲလှည့်ပတ်ခဲ့တဲ့သဘာဝအချသောဆုဖြစ်၏ (ကြည့်ရှု porn ထိုအခါနှင့်အခုဆိုရင်: ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေးမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် နှင့် မူးယစ်အပြုအမူ: Dopamine ၏ 300 လိင်အင်္ဂါ = တစ်လော).
လိင်မှုနှင့် porn စွဲလမ်းမှုတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ASAM မှမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းသုံးခုကိုလေ့လာကြည့်ကြစို့။ ဤပထမ ဦး ဆုံးမေးခွန်းကစွဲလမ်းမှုအားလုံးသည်အချို့သော ဦး နှောက်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်းကိုရှင်းလင်းစေသည်၊ ၎င်းသည်တိကျသောအပြုအမူများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများဖြစ်သည်။
အတိတ်အတွက်အာရုံစိုက်ထိုကဲ့သို့သောအရက်, ဘိန်းဖြူ, ဆေးခြောက်, ဒါမှမဟုတ်ကင်းအဖြစ်စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်ယေဘုယျဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုအသစ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက်. မဟုတ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်ဦးနှောက်အကြောင်းကိုရဲ့စေသည်။ ဒါဟာသူတို့ကိုတစ်ဦးစှဲလမျးသူလုပ်မယ့်သူတစ်ဦးကိုအသုံးပြုသည်အဆိုပါတ္ထုများမျှမက, ဒါကြောင့်အသုံးပြုမှုပင်အရေအတွက်သို့မဟုတ်အကြိမ်ရေမဟုတ်ပါဘူး။ စွဲလမ်းကိုသူတို့အကြိုးတ္ထုများသို့မဟုတ်အကြိုးအပြုအမူတွေကိုထိတွေ့ကြသောအခါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်အကြောင်းနှင့်ကဆုလာဘ် "ပေါ်တွင်ဖွင့်က" ပြင်ပဓာတုပစ္စည်းသို့မဟုတ်အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. ထက်ကဦးနှောက်နှင့်ဆက်စပ်သည်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်ဆုလာဘ် circuitry အကြောင်းပိုမိုဖြစ်ပါတယ် circuitry ။
အလွန်ကြီးစွာသောကိုးကားချက် -“ စွဲလမ်းမှုသည်လူတစ် ဦး ဦး နှောက်တွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာများအကြောင်းဖြစ်သည်။ ” ဒီဟာကိုအကြိမ်ဘယ်လောက်ပြောခဲ့တာလဲ။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်က၎င်းသည်လှုံ့ဆော်မှုပုံစံသို့မဟုတ်ပမာဏမဟုတ်ဘဲ၊ ရလဒ်များကို ယင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု၏။ ရိုးရှင်းစွာထားပါ, ရှိသမျှစွဲအားဖြင့်မျှဝေဘုံအပြုအမူတွေနဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေအဖြစ်ကောင်းစွာ shared ဦးနှောက်ပြောင်းလဲထောက်ပြတာပါ။ (ယူ ဒီပဟေဠိ အဆိုပါစွဲဖြစ်စဉ်ကိုသင့်ဦးနှောက်ထဲမှာကိုင်ယူပြီးလျှင်ကြည့်ဖို့။ )
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုတော့ဘူးကင်းသို့မဟုတ်ဆေးလိပ်သောက်စီးကရက်ဖြစ်ပါတယ် snorting ထက်, ကိုယ်ကျင့်တရားပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ လူအားလုံးတို့သည်ဦးနှောက်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထိခိုက်ကြောင်းကျန်းမာရေးကိစ္စများဖြစ်ကြသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်သဘာဆုလာဘ်မှဘုံဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကဤဆောင်းပါးများကိုတှငျဖျောပွထားသညျ အဆိုပါ Porn Debate ၏အဆုံး? နှင့် အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းကျုံ့ဦးနှောက်: Porn အသုံးပြုသူများအဘို့အနိမိတျဆိုးသတင်းများ။
လောင်းကစားဝိုင်းမှစွဲလမ်းကောင်းစွာအများအပြားဆယ်စုနှစ်များအတွက်သိပ္ပံနည်းကျစာပေများတွင်ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ တကယ်တော့ခုနှစ်, DSM (DSM-V ကို) ၏နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ဝေပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်တူညီသောအပိုင်းအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါစာရင်းပြုစုပါလိမ့်မယ်။
အသစ် ASAM ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်စွဲလည်းကြိုးဖြစ်ကြောင်းအပြုအမူတွေမှဆက်စပ်သည်မည်မျှဖော်ပြအသုံးပြုပုံရုံပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့်အတူစွဲ equating ကနေထွက်ခွာစေသည်။ ဤသည် ASAM စွဲတစ်ခုတည်းကိုသာမဟုတျကွောငျးတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးအနေအထားခေါ်ဆောင်သွားပြီ "ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခို။ " ပထမဦးဆုံးအကြိမ်
ဤသည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်စွဲလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ဦးနှောက် circuitry အကြောင်းနှင့်မည်သို့စွဲလမ်းနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဦးနှောက်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုစွဲရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ဦးနှောက်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုကှာခွားကပြောပါတယ်။ ဒါဟာဦးနှောက်နှင့်ဆက်စပ် circuitry အတွက်ဆုလာဘ် circuitry အကြောင်းကိုပြောသွားပေမယ်အလေးပေးအကျိုးကို system ပေါ်တွင်ပြုမူသောပြင်ပဆုလာဘ်အပေါ်မဟုတ်ပါဘူး။ အစားအစာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့လောင်းကစားဝိုင်းအပြုအမူတွေစွဲ၏ဤအသစ်သောအဓိပ်ပါယျမှာဖော်ပြထားတဲ့ "ဆုလာဘ်၏ရောဂါဗေဒလိုက်စား" နဲ့ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်အစားအစာနှင့်လိင်အကြိုးစေသည်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry ရှိသည်။ တကယ်တော့ဒီရှင်သန်မှုယန္တရားဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာဦးနှောက်အတွက်ဤဆုလာဘ်မွတ်မပြေနိုင်သောသို့မဟုတ်များအတွက်တုံ့ပြန်ချက်ယန္တရားများရှိ '' အလုံအလောက်။ ' စွဲလမ်းနှင့်အတူတစ်စုံတစ်ယောက်မှာ circuitry တစ်ဦးချင်းစီမှသတင်းစကားတ္ထုများနှင့်အပြုအမူများအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်ဆုလာဘ်နှင့် / သို့မဟုတ်သက်သာ၏ရောဂါဗေဒလိုက်စားမှဦးဆောင်သော '' ကိုပိုမို '' ဖြစ်လာထိုကဲ့သို့သောကြောင်းအလုပ်မဖြစ်ဖြစ်လာသည်။
ASAM သည်ရှင်းလင်းမှုမရှိပါ။ လိင်စွဲတည်ရှိ, ထိုသို့အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအဖြစ်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဇီဝြဖစ်စဉ်အတွက်တူညီတဲ့အခြေခံကိုပြောင်းလဲကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများဘာမျှပေမယ်တိုးပြုပါသို့မဟုတ်ပုံမှန်ဇီဝလုပ်ငန်းဆောင်တာလျော့ကျအဖြစ်ဤသည်ပြီးပြည့်စုံသောအသိကိုမှန်ကန်စေသည်။ သူတို့ကသဘာဝအဆုလာဘ်ဘို့အာရုံကြောဆားကစ် hijack, ဒါကြောင့်သဘာဝအဆုလာဘ်၏အစွန်းရောက်ဗားရှင်းကိုလည်းသူများဆားကစ် hijack နိုင်ပါတယ်ကွောငျးထငျရှားဖြစ်သင့်သည်။
ASAM စွဲမှ neuroscience ထံမှသက်သေအထောက်အထား mounting တစ်ဦးတည်းသာနိဂုံးချုပ်စေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုအသစ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ထုတ်ဝေရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အောက်ပါစာမျက်နှာများကိုသဘာဝအစှဲအပေါ်သုတေသနတစ်ခုနမူနာကိုယ်စားပြု: အင်တာနက်နှင့်ဗွီဒီယိုဂိမ်းစွဲခြင်း၊ အစားအသောက်စွဲလမ်းမှု, နှင့် လောင်းကစားစွဲ။
ASAM ရဲ့အသစ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အဘယ်အရာကို neuroscientits အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်ဆုံးနဲ့စွဲကျွမ်းကျင်သူများကပြီးသားသိတယ်: သဘာဝဆုလာဘ်စွဲစေနိုင်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုပျောက်ဆုံးရဲ့အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်စွဲလမ်း၏မှိုအပေါ်တစ်ဦးဆွေးနွေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို ပို. ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကျား Wood ကရဲ့အပြုအမူထက်စွဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရန်ဖြစ်ပါသည်။
David Linden ၏“ The Compass of The Pleasure” စာအုပ်သည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြသည် မဟုတ် တိုက်ရိုက် dopamine သက်ရောက်မှု၏အရွယ်အစားချည်ထားလေ၏။ ဥပမာစီးကရက်, သူတို့ကိုစုံစမ်းသောသူတို့၏အမျိုးအချိတ်နီးပါး 80% အသုံးပြုသူဘိန်းဖြူချိတ်တစ်ခုသာမဟုတ်ဘဲအသေးလူနည်းစုနေစဉ်။ ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ပါသည် စွဲသင်ယူနေသည်, နှင့်ဆေးလိပ်သောက်သူများ dopamine အနည်းငယ်သာ "ဆုလာဘ်" နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ ဦး နှောက်လေ့ကျင့်။ ဘိန်းဖြူသုံးစွဲသူများသည်အာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ“ သင်ခန်းစာများ” ကိုပိုမိုပြင်းထန်စေသည်။ ဒါကြောင့်ဘိန်းဖြူကလူနည်းပါးတယ်။ ဘိန်းဖြူသုံးစွဲသူများကဲ့သို့စစ်မှန်သောလိင်စွဲလမ်းသူများ (အမှန်တကယ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်) သည်များသောအားဖြင့်အကန့်အသတ်မရှိ“ ပြင်ဆင်မှုများ” မရနိုင်ပါ။ သူတို့သည်ဘိန်းဖြူသို့မဟုတ်အခြားစွဲလမ်းသူများနှင့်မတူဘဲပိုမိုလှုံ့ဆော်သည့်ထုံးတမ်းစဉ်လာများရှိနိုင်သည်။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအသီးအသီးဝတ္ထု image ကိုသေးငယ်တဲ့ dopamine ပေါကျကှဲကမ်းလှမ်းကြောင်းအတွက်ဆေးလိပ်ဖို့ပိုကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ porn အသုံးပြုသူများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်မကြာခဏနေ့စဉ်များစွာသောပုံရိပ်တွေ / ဗီဒီယိုကြည့်ရှုရန်နှင့်အမျှသူတို့ဆေးလိပ်သောက်ပြုပါအများကြီးအဖြစ်အလွန်မကြာခဏသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုလေ့ကငျြ့နေကြသည်။ ရှင်းပြအဖြစ် porn, အသစ်အဆန်းများ, နှင့် Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှု, န့်အသတ်အသစ်အဆန်းသာမန်မွတ်မပြေနိုင်သောပယ်ဖျက်ဖို့သူတို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ ထို့အပြင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရဲ့မွေးရာပါအရည်အသွေးတွေကိုတွေ့မြင်, လိင်စွဲလမ်းရိုးရှင်းစွာမကိုက်ညီနိုင်မနည်းလမ်းတွေနဲ့ dopamine ထိခိုက်စေ porn ထိုအခါနှင့်အခုဆိုရင်: ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေးမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
တစ်နည်းဆိုရသော်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းသူများအတွက်စွဲလမ်းစေသောအာရုံကြောဓာတုဗေဒဗုံးပေါက်ကွဲမှုမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုသည်လိင်စွဲလမ်းမှုမျှသာမဟုတ်ပါ။ မျိုးဗီဇ၏အဓိက ဦး စားပေးဖြစ်သည့်မျိုးပွားခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့် ၀ တ္ထုအသစ်များအားတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်အာရုံကြောဓာတုဆိုင်ရာဆုလာဘ်အတွက်အစီအစဉ်ကို၎င်းကသိမ်းဆည်းထားပါသည်။ ၎င်းသည်နှစ် ဦး စလုံးသည်အင်တာနက်ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲလမ်းမှုနှင့်ပိုတူသည်။
တိုတိုမှာ, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစွဲအင်တာနက်က porn မှဝင်ရောက်ခွင့်မရှိဘဲအတော်လေးရှားပါးပါလိမ့်မယ်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ (porn မပါဘဲ) တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစွဲကောင်းစွာတဲ့လိင်စွဲလမ်းနှင့်ရှားပါးပါလိမ့်မယ်စဉ်တွင်, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲတစ်ဦးကွဲပြားခြားနား-နှင့် ပို. neurochemically seductive-တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပါသည်။
စကားမစပ်၊ မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့်သုတေသနအရဟန်ဂေရီရှိဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အင်တာနက် - ညစ်ညမ်းသောတရုတ်နိုင်ငံတို့အကြားအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုသည် ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းအသီးသီးရှိသည်။ (“ အင်တာနက်ပြictionနာပြFနာသုံးခုကိုမော်ဒယ်လ်အတည်ပြုချက်ကိုကြည့်ပါ။ လိုင်းဆယ်ကျော်သက်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက်နမူနာများ” နှင့်“ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာပြorderနာများရှိသောဆယ်ကျော်သက်များတွင်အဏုဇီဝဗေဒမူမမှန်မှုများ” ကိုကြည့်ပါ။ ) အဝလွန်မှုနှုန်းမှကြည့်လျှင်အစာစားစွဲလမ်းမှုနှုန်းသည် ၃၀ +% ရှိသည်။ ။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှုန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်ထက်ပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည့်အကြောင်းအရင်းမှာ ၄ င်းတို့သည်အပြိုင်လိင်စွဲလမ်းမှုနှုန်းကို“ မဖြစ်မနေ” ရမည်ဟုယူဆခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
စွဲလမ်းမှု၏ ASAM ရဲ့အဓိပ္ပာယ်: မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ (2011)
(L) အမေရိက၏ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူများ (ASAM) သည်စွဲလမ်းမှုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အသစ် (၂၀၁၁) ကိုယခုပင်လွှတ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။